2009 | ဓမ်မဥပဒေ ပွနျ့ပှားရေးအသငျးခြုပျ
အရှင်ကောဝိဒ (ယော) | 5:05 AM | ဓမ္မဓူတအရှင်ပညာဇောတ | မျှဝေခံစား | အခြားကလောင်ရှင်များ Be the first to comment!
ဘုရားထက်သာတယ်-ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညာဇောတ(ဗုဒ္ဓဓမ္မပြဿနာပေါင်းချုပ် ၊ ပထမတွဲမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
ယခုခေတ်သည် တရားအားထုတ်သူ ပေါများသော ခေတ်ဖြစ်၏။ အမြို့မြို့ အရွာရွာမှာ တရားအားထုတ်သူများမှာ အနည်းအများ ဆိုသလို ရှိကြကုန်၏။ တရားဟောရာတွင်တောင် ၀ိပဿနာဟောမှ အများကြိုက်ကို ဖြစ်လာ၏။ ယင်းသို့ ၀ိပဿနာတရား နာကြားအားထုတ်သူများ ပေါများလာ၍ တစ်ဖက်ကကြည့်လျှင် အားရ၀မ်းသာ စရာပင် ဖြစ်၏။ တစ်ဖက်ကကြည့်လျှင် အားမရစရာ ၀မ်းမသာစရာတွေ များစွာတွေ့နေရ၏။
မှန်၏။ တရားအားထုတ်ခြင်းသည် အစွဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင် အားထုတ်ခြင်းဖြစ်၏။ တစ်ချို့မှာ တရားအားထုတ် ပြီးမှ အစွဲအလမ်း ပို၍ပင် ကြီးနေသည်ကို တွေ့ရ၏။ အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ တရားစွဲတွေ ဖြစ်လာ၏။
ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ တွေ ထားပါဦး။ တရားစွဲမှာ ဖြစ်ရန်မသင့်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဟောသမျှ၊ ပြသမျှ တရားတွေမှာ ဘယ်သူပဲ ဟောဟော၊ ပြပြ ဘုရားရှင်၏ တရားတွေကိုချည်း ဟောကြ၊ ပြကြရသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ယင်းသို့ ဘုရားရှင်၏ တရားတော်တွေကိုချည်း ဟောကြ၊ ပြကြရာ၌ ဘုရားရှင်၏ အာဘော်ကျသူနှင့် မကျသူဟူ၍ နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိသည်။ ယင်းကိုတော့ သာမန် သူလိုကိုယ်လို ယောဂီများ သိဖို့မလွယ်ကူ။ သို့မလွယ်ကူဘဲ `တို့နည်းမှ နည်းကောင်း၊ တို့ဆရာမှ ဆရာကောင်း´ ဟု စွဲထားလျှင် ဘယ်သူနစ်နာမည်နည်း။
တစ်ခါက မိမိသည် တောရတစ်ခုတွင် နေ၏။ မိမိနှင့်အတူ သီတင်းသုံးဖော် နှစ်ပါးရှိ၏။ မိမိပါဆိုလျှင် သုံးပါးရှိ၏။ ဥပုသ်နေ့တွင် မိမိနှင့်တစ်ပါးမှာ တရားဟော၏။ သူက မနက်ဟောလျှင် မိမိက နေ့လယ်တွင် ဟော၏။ သူက နေ့လယ်ဟောလျှင် မိမိက နံနက် ဟော၏။ ပရိသတ်မှာ ရံခါ မိမိအား၊ ရံခါ သူ့အား သင့်သလို မေးလျှောက်စရာရှိလျှင် မေးလျှောက်လေ၏။ တစ်နေ့ ဒကာမကြီးတစ်စု သူ့ထံသို့ ချဉ်းကပ်လျှောက်မေး၏။
`အရှင်ဘုရား၊ (သူ)က ညည်းတို့ တရားအားထုတ်တာ ဘာဖြစ်ပြီလဲ၊ ငါတော့ `ဝေဒနာကုန်ပြီ´ လို့ ပြောတယ်ဘုရား။
အဲဒါ သူက ညည်းတို့ဘုန်းကြီး လျှောက်ကြည့်စမ်းပါ၊ ဝေဒနာကုန်လျှင် ဘယ်အဆင့် ရောက်တယ်ဆိုတာ၊ ညည်းတို့ဘုန်းကြီး သိပါတယ်လို့ တို့ဆရာတော်က ပြောတယ်လို့ ပြောတယ်ဘုရား၊ ဝေဒနာကုန်တော့ ဘယ်အဆင့် ရောက်သွားပြီလဲဘုရား´
`ဒကာမကြီး၊ အဲဒီ ဒကာမကြီးကို ပြောလိုက်၊ ဝေဒနာကုန်လျှင် ဘုရားထက် သာတယ်´လို့
ထိုအရှင်သည် ကာယိကဒုက္ခ ဝေဒနာကုန်မှုကို ရည်ရွယ်ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ မေးခိုင်းသည့်ယောဂီ ကုန်တယ်ပြောတဲ့ ဝေဒနာမှာလည်း ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာပင် ဖြစ်၏။ ကာယိက ဒုက္ခဝေဒနာမှာလည်း ဘုရားမှာပင် မကုန်သေး။ ယောဂီက ကုန်ပြီပြော၍ ဘုရားထက် သာတယ်ဟု ပြောခြင်းဖြစ်၏။ ဒကာမကြီးများ မှာ သဘောကျလွန်းလို့ ခွက်ထိုးခွက်လှန် ရယ်မောကြတော့၏။ အားရပါးရ ရယ်မောကြတော့၏။ ရယ်မောပြီး တဖန် ပြန်လျှောက်ပြန်၏။
`အရှင်ဘုရား၊ ဝေဒနာကုန်လျှင် ဘုရားထက်သာတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲလားဘုရား´
`ခက်နေပါပြီ ဒကာမကြီးကလည်း၊ တကယ်ဝေဒနာကုန်လျှင် တကယ်ဘုရားထက် သာတာပေါ့။´
`ဒါဖြင့် တပည့်တော် (သူ့)ကို ဒီအတိုင်း ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဘုရား´
`ဒီအတိုင်းပြောရုံပဲရှိတာပေါ့၊ ရှင်းပြလည်း ဒကာမကြီးက အကုန်ပြန်ရှင်းနိုင်တာမှ မဟုတ်တာဘဲ´
`နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပါဦးဘုရား၊ မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောတာပေါ့၊ တပည့်တော်တို့လည်း မှတ်ထားရတာပေါ့´
`ကဲ ဒါဖြင့် နားထောင်´
`အခါတစ်ပါး ဘုရားရှင်သည် ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂိရမြို့ငယ်၊ သားရဲတို့အား ဘေးမဲ့ပေးရာ ဘေသကဠ တော၌ နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ နကုလပိတာ သူကြွယ်သည် ဘုရားရှင်ထံ ချဉ်းကပ်ရှိခိုးပြီး လျှောက်ထား၏။'
`အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် အသက်အရွယ် ကြီးပြင်းအိုမင်းပါပြီ၊ အရွယ်သုံးပါးတွင် နောက်ဆုံးအရွယ် သို့ ရောက်ပါပြီ၊ နာကျင်သော ကိုယ်ရှိပါ၏။ မပြတ်နာကျင်၍ နေပါ၏´
`အရှင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်သည် မြတ်စွာဘုရား ကိုလည်းကောင်း၊ စိတ်နှလုံးကို ပွားစေတတ်သော ရဟန်း တော်တို့ကိုလည်းကောင်း အမြဲမပြတ် မဖူးမြင်နိုင်တော့ပါ။´
`အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ဆုံးမတော်မူပါ၊ ကံမြစ်တော်မူပါ၊ ယင်းအဆုံးအမတော်သည် အကျွန်ုပ်အား ကြာမြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး စီးပွားချမ်းသာ အလို့ငှါ ဖြစ်ပါ၏။´
`သူကြွယ်၊ ဤစကားသည် မှန်၏။ ဟုတ်၏။ သူကြွယ်၊ ဤကိုယ်သည် နာကျင်သည်သာတည်း၊ ဥကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အရေပါးတို့ဖြင့် မြှေးယှက်ထားအပ်၏။´
`သူကြွယ်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ဤကိုယ်ကို ရွက်ဆောင်နေရလျက် တစ်ခဏမျှသော်လည်း အနာကင်းခြင်းကို ၀န်ခံပါလျှင် ထိုသူအား မိုက်သည့်အဖြစ်မှတစ်ပါး အခြားမရှိတော့ချေ´
`သူကြွယ်၊ ထို့ကြောင့် ဤအရာဝယ် `ငါသည် နာကျင်သော ကိုယ်ရှိသူဖြစ်လျက် ငါ၏ စိတ်သည် နာကျင်မှုကင်းသည် ဖြစ်လတ္တံ့´ ဟု ဤသို့ သင်ကျင့်အပ်၏´
`ကဲ… အဲဒီမှာ ဘုရားက ဘယ်လိုဟောထားလဲ၊ ဒီကိုယ်ဟာ နာကျင်သည်သာ ဖြစ်၏။ ဥကဲ့သို့ဖြစ်၏တဲ့၊ ဥဆိုတာ ဘာနဲ့ထိထိ သူပဲနာတယ်၊ ကွဲတယ်၊ ဒီကိုယ်ဟာ အရေပါးနှင့် အမြှေးယှက်ထား၍လည်း ဘာနဲ့ထိထိ သူပဲနာတယ်၊ ဒီကိုယ်ရှိနေလျက် `တစ်ခဏမျှသော်လည်း အနာကင်းပါတယ်´ ဆိုလျှင် လူမိုက်တဲ့၊
ဒါကြောင့် `ကိုယ်ကတော့ နာကျင်ချင် နာကျင်ပစေ၊ စိတ်မနာအောင် ကျင့်တဲ့´ ကိုယ်နာတာ သည်းခံပြီးကျင့်တဲ့။´
`ပြီးတော့ ဘုရားရှင် ဇီဝက၏ သရက်ဥယျာဉ်ဝယ် နေတော်မူသောအခါ ဒေ၀ဒတ် ကျောက်ဖြင့် ပစ်ချခြင်းကြောင့် ခြေမတော်ဝယ် သွေးစိမ်းတည်၍ အနာယဉ်းတယ်၊ ဇီဝကက ဓားဖြင့်ခွဲ၍ ဆေးလိမ်းကျပ်စည်း ပြီး ကုသတယ်၊ ဇီဝကက `ကိုယ်တော် ပူပန်ခြင်း ဖြစ်သလော´ ဟု လျှောက်သော် ကိုယ်တော် ပူပန်သော်လည်း စိတ်ပူပန်ခြင်း မရှိကြောင်း မိန့်တယ်။´
`သံသရာခရီးကို သွားရောက်ပြီး ဖြစ်ထသော၊ စိုးရိမ်ခြင်းမှ ကင်းထသော၊ ခန္ဓာစသော ခပ်သိမ်းသော တရားတို့၌ ကင်းလွတ်ထသော၊ ခပ်သိမ်းသော ဂန္ထလေးပါးကို ပယ်ပြီးထသော ပုဂ္ဂိုလ်အား စိတ်ပူပန်ခြင်းသည် မရှိ။´(အရဟန္တ၀ဂ်၊ ဓမ္မပဒ)
`ပြီးတော့ သံကိစ္စသာမဏေကို ခိုးသူကြီးက သတ်တော့ မျက်နှာကြည်လင်ပြီး ကြောက်ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိတော့ အံ့သြပြီး သာမဏေကို မေးတယ်။
`သာမဏေ၊ ဤသို့သဘောရှိသော ကြောက်မက်ဖွယ်ရေး သေဘေး၌ သင့်အား ကြောက်ခြင်းမရှိ၊ ပိုလွန်၍ ရှေးကထက် ကြည်လင်လှပလာ၏၊ သာမဏေ သင်သည် ဘယ့်ကြောင့် မငိုသနည်း´
`ဂါမဏိ ခိုးသူကြီး၊ ကိုယ်ကို ငဲ့ကွက်ခြင်း မရှိသော၊ အာသဝေါကုန်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်အား စိတ်ဆင်းရဲခြင်း စေတသိကဒုက္ခ မရှိ၊ သံယောဇဉ်ကုန်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်အား စင်စစ် ကြောက်မက်ဖွယ်ရေး ဘေးအားလုံးကုန်ပြီ´ (သဟဿဝဂ်၊ ဓမ္မပဒ)
`ဘုရားဟောထားတာ နောက်အများကြီး ရှိသေးတယ်၊ တော်ပြီ ဒီလောက်ပဲ၊
ကဲ… ဒကာမကြီး ပြန်ပြောတတ်ပါ့မလား´
`ဒါဖြင့် ဒီလိုပြောလိုက်၊ ဘုရားရဟန္တာများတောင်မှ စိတ်နာကျင်မှု စေတသိက ဒုက္ခဝေဒနာသာကုန်၍ ကိုယ်နာကျင်မှု ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာ ရှိသေးတယ်၊ ဘုရားရဟန္တာများ တောင်မှ မကုန်တဲ့ ဝေဒနာကုန်လို့ `ဘုရားထက်သာတယ်´ လို့ ပြောလိုက်´
ဒကာမကြီးများမှာ ရယ်ကာမောကာနှင့် ရှိခိုးဦးချ၍ `ပြောလိုက်ပါ့မယ်ဘုရား´ဟု ပြောရင်း ပြန်ကြလေတော့၏။
• ဗုဒ္ဓတရား ရှုပွားများ လွဲမှားအယူ ကင်းစေသော်။
(ဗုဒ္ဓဓမ္မပြဿနာပေါင်းချုပ် ၊ ပထမတွဲမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
Posted by အရှင်ကောဝိဒ (ယော) at 5:05 AM No comments:
အရှင်ကောဝိဒ (ယော) | 9:42 AM | ထက်စုနှင်းဆီ | မျှဝေခံစား | အခြားကလောင်ရှင်များ Be the first to comment!
(ကလောင်ရှင်- ထက်စုနှင်းဆီ )(၀ိမုတ္တိရသ-မှ ကူးယူဖော်ပြသည်)
စိတ်နဲ့သိတဲ့ ဖြစ်တာမှန်သမျှ ခန္ဓာငါးပါးအတုပဲ၊ ဖြစ်ရုံသက်သက်၊ ဖြစ်ကာမတ္တ ဖြစ်နေတဲ့ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကမှ ခန္ဓာငါးပါး ဒုက္ခသစ္စာအစစ်။ ဖြစ်တာပျက်တာမဟုတ်၊ ပျက်တာဖြစ်တာ။ ပြုလုပ်ကာမတ္တ ပြုလုပ်မူတွေ ပျက်နေတာ။ ဘာလုပ်လုပ် လက်ခံ သိမ်းပိုက်ပြီးမလုပ်နဲ့၊ စွန့်လုပ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ရုံသက်သက်လုပ်၊
အတ္တ(တစ်ခုခု၊တစ်ယောက်ယောက်၊တစ်ချိန်ချိန်၊တစ်နေရာရာရဲ့အား) မပါစေနဲ့။ တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ချိန်၊ တစ်နေရာဆိုတဲ့ အထင်မှားကင်းကင်း၊ အစွဲကင်းကင်း လုပ်ရုံသက်သက်လုပ်မှ ကိလေသာဖြစ်နေမှုက လွတ်လပ်ရေးရမယ်။ မကန့်သတ်ဖို့၊ မပညတ်ဖို့၊ မဆုပ်ကိုင်ဖို့၊ မသိမ်းပိုက်ဖို့ အဓိကထားမှ တရားအလုပ်စစ်။>><<ရှင်းလင်းခြင်း>> <<မေ့လျော့မှု ( အ၀ိဇ္ဇာ ) ကြောင့်>>
Posted by အရှင်ကောဝိဒ (ယော) at 9:42 AM No comments:
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကို မှားယွင်းစွာ ဟောပြောရေးသားချက်ကို ဖြေရှင်းချက်
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 2:09 AM | အဓမ္မ၀ါဒမိုးပြာ Be the first to comment!
“အတွေ့မှ အထူးအားဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမူ့၊ မေထုန်မူ အတွေ့မှ ကာမဂုဏ်မဟုတ်ဘူး။ အာရုံငါးပါးကို ကိုယ့်လိုအင်နဲ့ တွေ့ထိမူတွေဟာ ကာမဂုဏ်တွေပဲ။ ဒါတွေကို မှားယွင်းကျက်စားတာဟာ ကာမဂုဏ် မှားယွင်းကျက်စားမူပဲ”
(ဘုရား၊ စာအုပ်- စာ-၁၅၃)
“မှားယွင်းကျက်စားမူကို အဓိပ္ပါယ် နည်းနည်းဖွင့်ရမယ်။ ကာမဂုဏ် ကျက်စားတာ မှားယွင်းကျက်စားနဲ့ မမှားမယွင်း ကျက်စား နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်။ စားစရာတွေလဲ ကာမဂုဏ်တွေပဲ။ ၀တ်စရာတွေလဲ ကာမဂုဏ်တွေပဲ။ ကျန်တဲ့ လူအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေ အားလုံးလည်း ကာမဂုဏ်တွေပဲ။ အသုံးကို လွန်ပြီး အကြိုက် အစွဲ အလျောက် ကျက်စားတာဟာ မှားယွင်းတဲ့ ကျက်စားမူပဲ။(ဘုရား၊ စာအုပ်- စာ-၁၅၄)
"စားတယ်၊ ၀တ်တယ် သုံးဆောင်တယ်၊ ကြည့်တယ် အစရှိတာတွေလဲ ကိုယ်နဲ့ပဲ လုပ်ရတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီကိုယ်နဲ့ အမှုတွေမှာ မှားယွင်းကျက်စားတာတွေဟာ ကာမဂုဏ် မှားယွင်းကျက်စားတာတွေပဲ။(ဘုရား၊ စာအုပ်- စာ-၁၅၅)
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ၌ ကာမေသုသည် အရှင်ဥာဏ ဟောပြောသကဲ့သို့ အာရုံငါးပါးကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ။
ကာမေသူတိ မေထုန သမာစာရေသု။
(မဇ္ဈီမ ပဏ္ဏာသ အဌကထာ ၁၊ ၂၀၂)
(ပဋိသံ၊ ဌ၊ ၁၊၂၀၄)
"ကာမေသု ဆိုတာ ရာဂအားဖြင့် တူကုန်သော သူနှစ်ယောက်တို့၏ အကျင့်တို့၌ (မေထုန်အကျင့်)"တို့၌ ဟု ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကာမ ဆိုသည်မှာ မေထုန် အကျင့်ပင်ဖြစ်၍၊ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ဆိုသည်မှာ မေထုန်အကျင့်(မေထုန ၀တ္ထု)တို့၌
တကယ်ကဲရဲ့ထိုက်စွာ ယုတ်မာသော အကျင့်ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မေထုန်အကျင့် ဆိုသည်မှာ မိန်းမ ယောက်ျား နှစ်ဦးသားတို့၏ ပျော်ပါးရွှင်မြူး ကြည်နူးပေါင်းဖက် စပ်ယှက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယောက်ျား တို့အဖို့ မိမိပိုင် ဇနိးမယားနှင့် ပျော်ပါးခြင်း၊ မိန်းမ တို့ အဖို့ မိမိ၏ကာမပိုင် လင်ယောက်ျားနှင့် ပျော်ပါးခြင်းတို့မှာ
လောကအလိုက် မကဲ့ရဲ့ ထိုက်သဖြင့် ယုတ်မာသည်ဟု မဆိုသာသဖြင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မဖြစ်ပါ၊ မိမိဇနီးမောင်နှံမှ တပါး မသွားလာအပ်သူ အမျိုးသမိးနှစ်ဆယ်နှင့် ပျော်ပါးခြင်းတို့ကား လောက အလိုက်ကဲ့ရဲ့ ထိုက်၍ ယုတ်မာသော အကျင့် ဖြစ်သောကြောင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ ကံ ထိုက်ပါသည်။
ဤ၌ မသွားလာထိုက်သော မိန်းမ(၂၀) ဆိုသည်ကို အကျယ်ရေးပြပါမည်
၉-၀မ်းတွင်းကပင်မှန်း၍စောင့်ရှောက်ထားသောမိန်းမ။(အမိဝမ်းတွင်းကပင် ဖွားမြင်လာလျှင် မယားအဖြစ်လက်ထပ်ယူရန် တောင်းရမ်းသတ်မှတ်ထားသောမိန်းမ)။
၁၀-မင်းဒဏ်ထားသောမိန်းမ(အာဏာပိုင်တို့က ကိုယ်တိုင်သိမ်းပိုက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသဖြင့် ဤမိန်းမကိုသွားလာကျူးလွန်လျှင် ဤအပြစ်ဒဏ်သင့်စေ ဟု သတ်မှတ်ထားသောမိန်းမ)
၁၃-စည်းစိမ်အတွက်သွားရောက်နေထိုင်သောမယား(ယောက်ျားထံမှ ဆုံ၊ကျည်ပွေ့ စသော အိမ်အသုံးအဆောင်ကိုရ၍ မယားအဖြစ်ခံယူသောမိန်းမ)။
၁၄-ထမီအတွက်နေထိုင်သောမယား(၀တ်ရုံလောက်ကာမျှသော အ၀တ်ထမီကိုရ၍ မယား အဖြစ်ခံယူသောမိန်းမ)။
၁၅-ရေခွက်၌ လက်နှစ်ဘက်ချ၍ ထိမ်းမြားသောမယား
(ဤရေသည်မကွဲမပြားသကဲ့သို့ သင်တို့နှစ်ယောက်မကွဲမပြားစေသတည်းဟု ရေတစ်ခွက်တည်း၌ လက်နှစ်ဘက်ကိုချကာမိဘနှစ်ပါးစုံထိမ်းမြားပေးသောမယား)။
(ထင်းခွေ၊ ရေခပ်ခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်နေသောအမျိုးသမီးကို မယားအဖြစ် သိမ်းပိုက်လို၍ သင်ယနေ့မှစ၍ ထင်းခွေ၊ ရေခပ်ခြင်းအမှုကိုမပြုနဲ့တော့ ဟုပြောဆိုသိမ်းပိုက်ထားသောမယား။
၁၉-စစ်အောင်သဖြင့် အောင်လံစိုက်ထောင်၍ ယူဆောင်အပ်သောသုံ့ပန်းမယား။
၂၀-တစ်ခဏမျှပေါင်းဖော်ရသော ပြည့်တန်ဆာ စသောမိန်းမများ ဖြစ်ပါသည်
အသဓမ္မာ ဓိပ္ပါယေန ကာယဒွါရ ပ၀တ္တာ အဂမနီယဌာန ၀ီတိက္ကမစေတနာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရရော။
"ယုတ်မာသော မသူတော်တို့၏ အလိုသဘောဖြင့် မသွားလာထိုက်သော မိန်းမတို့၌ လွန်ကျူးကြောင်း ကာယကံ စေတနာသည် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မည်၏။“ ဟု ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ၌ ကမ္မပထမြောက်သည့် အဂါင်္လေးပါးရှိ၏။
ဤ အဂါင်္လေးပါး တို့မှာ..
၁။ မသွားလာထိုက်သော မိန်းမဆိုသည့် အဂမနီယ ၀တ္ထုဖြစ်ခြင်း၊
၂။ ထိုဝတ္ထု၌ မှီဝဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံလိုသည့် စိတ်ရှိခြင်း။
၃။ မှီဝဲမူ လုံးလမယောဂ ပြုခြင်း။
၄။ မှီဝဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၌ သာယာခြင်း.. တို့ဖြစ်၏။
ဤ အဂါင်္လေးပါးနှင့် မညီလျှင် ကမ္မပထ မမြောက်ဘဲ လေးပါးညီမှသာလျှင် ကမ္မပထ မြောက်၏။“ဟု အဌကထာဆရာတို့
ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အဌကထာ အဖွင့်တို့ အရ ငါးဖြာအာရုံ ကာမဂုဏ်ခံစားမူ။ ကလေးပွေ့မူ။ မိမိကာမပိုင်ကို မှီဝဲမူတို့သည် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ မထိုက်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အရှင်ဥာဏ၏ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကို မှားယွင်းစွာဟောပြောရေးသားချက် များသည် အဓမ္မ၀ါဒ ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 2:09 AM No comments:
နိုင်ငံတော်ပိုင် အဖွဲစည်းပိုင် ပစ္စည်းခိုးတာဟာ အဒိန္နဒါနကံ မထိုက် သီလမပျက်” ဟူသော ဟောပြောရေးသားချက်ကို ဖြေရှင်းချက်
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 2:20 AM | အဓမ္မ၀ါဒမိုးပြာ Be the first to comment!
အရှင်ဥာဏက-“ဂရုဓမ္မသီလထဲက မခိုးရသိက္ခာပုဒ်ရဲ့ အနက်မှာနည်းနည်းပါးပါး ခိုးယူမူ့ မပါဝင်ဘူး။ ဒါသိဖို့လိုတယ်။ ဒါကလေးလောက်တောင် လိုက်နာဖို့ ဖြစ်လာရင် ဒီသီလဟာ လူတွေမလိုက်နာနိုင် ဖြစ်လာမယ်။ လူမလိုက်နာနိုင်တဲ့ ဟာကို ဘုရားကတရားလို့ မလုပ်ဘူး။”(ဘုရား-စာအုပ်-စာ-၁၄၅)
ဒါတွေကို ထောက်ပြီး အသေးအမွားခိုးမူ့ဟာ မဂ်သီလဖြစ်တဲ့ “ဂရုဓမ္မသီလ မဖြစ်ဘူး”။ ဒါဟာ ဘုရားဖွင့်တဲ့ “ဂရုဓမ္မသီလ မခိုးရသိက္ခာပုဒ်ရဲ့ အနက်ပဲ ဒါရဲ့ အနက်ကို ဘုရားဖွင့်တာ ကျန်ပါသေးတယ် ဆက်ဖွင့်ရအောင်။(ဘုရား-စာအုပ်-စာ-၁၄၇)
မဂ်သီလဖြစ်တဲ့ ဂရုဓမ္မသီလ မခိုးရ သိက္ခာပုဒ်အရမှာ လူပိုင်မဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းအများအပြား ခိုးယူခြင်း မပါဝင်ဘူး။ သူပိုင်မဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းအများအပြားကို ခိုးယူပေမယ့် ခိုးရင် သီလမပျက်ဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်။ ဒါကိုတော်တော်ကြီး သိဖို့ကောင်းတယ်။ သူမဟုတ် သူပိုင်ပစ္စည်းခိုးမိပြီး စိတ်ပျက်နေကြသူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါ ဆုတ်ယုတ်ဖို့ပဲ။ (ဘုရား-စာအုပ်-စာ-၁၄၇/၈)
“နိုင်ငံတော်ဆိုတာ နတ်ကြီးတစ်ပါးပါပဲ။ မြို့၊ ရွာဆိုတာတွေလည်း နတ်တွေပဲ၊ သမ၀ါယမအဖွဲ့၊ ရဲအဖွဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ စစ်တပ်အဖွဲ့၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့၊ ဒါတွေလည်း နတ်တွေပဲ နတ်တွေ နတ်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရင် သိပ်ရှည်သွားမယ်။ အကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ လူတစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂလိကပိုင်မဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ နတ်ပိုင် ပစ္စည်းတွေပဲ။" (ဘုရား-စာအုပ်-စာ-၁၄၉)
"လူနဲ့ နတ်တို့ ဒီလိုခွဲရမှာဖြစ်တယ်။ လူအစုအမှတ်တွေဟာ လူဆိုတဲ့ ဂုဏ်ရည်က ကျော်သွားပြီ။ အဲဒီလူတွေပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဟာ လူပိုင်ပစ္စည်းအဖြစ်ကို ကျော်ပြီး နတ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီပစ္စည်းကို ခိုးယူခြင်းဟာ ဒီသီလ သိက္ခာမှာ အခိုးမမြောက်ဘူး၊ သီလမပျက်သေးဘူးပေါ့။"(ဘုရား-စာအုပ်-စာ-၁၅၀)
"နိုင်ငံပစ္စည်း ခိုးတာဟာ ဂရုဓမ္မသီလ မခိုးရ သိက္ခာပုဒ် မပျက်ဘူး။ ပစ္စည်းပိုင်သူဟာ ပုဂ္ဂလိက မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်ဖြစ်နေလို့ပဲ။ မြို့ ပိုင်၊ ရွာပိုင်၊ ဌာနဆိုင်ရာပိုင်၊ အဖွဲ့ အစည်းပိုင်၊ သမ၀ါယမပိုင် ပစ္စည်းတွေကို ခိုးတာဟာလည်း ဂရုဓမ္မသီလ (မခိုးရ သိက္ခာပုဒ်) အရအခိုးမမြောက်ဘူး။(ဘုရား-စာအုပ်-စာ-၁၅၁)
အရှင်ဥာဏ၏ အထက်ပါ ဟောပြောချက်တို့ကို အဋ္ဌကထာဆရာတို့၏ အလိုနှင့် ညှိနှိုင်းတိုက်ဆိုင် ကြည့်သောအခါ................
“အဒိန္နဿ အာဒါနံ အဒိန္နဒါနံ။
ပရဿ ဟရဏံ ထေယျံ စောရိကာတိ ၀ုတ္တံ ဟောတိ။"
(သံယုတ် အဌကထာ-၂၊ ၁၃၄။
မဇ္ဈိမ ပဏ္ဏာသ အဌကထာ-၁၊ ၂၀၂။
အရှင်သည် ကိုယ်နုတ်ဖြင့် မပေးအပ်သော သူတပါး ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းသည် အဒိန္နဒါန မည်၏။
သူတပါး ဥစ္စာကို ဆောင်ခြင်း၊ ခိုးခြင်း၊ ၀ှက်ခြင်း ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။“ ဟု ဖွင့်ဆိုထားသောကြောင့်
သူတပါး ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။“ ဟု ဆိုရာ၌ သူတပါးဟူသည်
မိမိမှ တပါး အခြားသော သူတို့ကို သူတပါးဟု ဆိုရပါသည်။
သံယုတ် အဌကထာ စသည်တို့၌-
“အဒိန္န န္တိ ပရပရိဂ္ဂဟိတံ၊ (သံယုတ် အဌကထာ-၂၊ ၁၃၄)
အဒိန္နံ ဆိုတာ သူပါးသိမ်းဆည်းအပ်သော ဥစ္စာတည်းဟု“ ဖွင့်သလို
ကခါင်္ဝိတရဏီ အဌကထာ စာမျက်နှာ ၁၁၅ ၌လည်း
“အဒိန္နံတိ အညဿ မနုဿ ဇာတိကဿ သန္တကံ။”
အဒိန္နံ ဆိုတာ မိမိမှ တစ်ပါး အခြားလူဇာတ် ရှိသူ၏ ဥစ္စာတည်း” ဟု ဖွင့်ဆိုထား၏။
ထို့ကြောင့် မိမိမှ တပါး အခြားသူ တစ်ဥိးတစ်ယောက်ပိုင် ပစ္စည်းဖြစ်စေ၊
ရပ်ကွက်ပိုင် ပစ္စည်း ဖြစ်စေ၊
အဖွဲ့စည်းပိုင် ပစ္စည်းဖြစ်စေ ခိုးယူပါက အဒိန္နဒါနပင် ဖြစ်ပါသည်။
အဒိန္နဒါန ကံ ၌.......
၁။ သူတပါး ဥစ္စာဖြစ်ခြင်း၊
၂။ သူတပါး ဥစ္စာဟုသိခြင်း၊
၃။ ခိုးယူလိုသော စိတ်ရှိခြင်း၊
၄။ ခိုးယူကြောင်းဖြစ်သော ကိုယ်မူ၊ နှုတ်မူ လုံးလ တစ်ခုခုကို ပြုခြင်း၊
ဟူသော အင်္ဂါ (၅) ချက်နှင့်ပြည့်စုံလျှင် အဒိန္နဒါနကံ မြောက်ပါ၏။
ပဋိဝေဓ သာသနာ ကို အုပ်စုဖွဲ့၍ ဖျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင် သူတော်ကောင်း အပေါင်း သိစေရန်
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 2:20 AM No comments:
ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီတို့အလို ပါဏာတိပါတကံကို သုံးသပ်ချက်
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 2:12 AM | အဓမ္မ၀ါဒမိုးပြာ | အရှင်ကောဝိဒ(ယော) Be the first to comment!
ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီတို့၏ အလို။ ။
-လူသိများတာက ဘုရားဟာ သတ်မူက ရှောင်ရမယ် အသက်ကို အားလုံးရဲ့ အသက်အဖြစ် ဟောတာလို့ သိနေကြတယ်။ ဒီလို သိမှားတာကတော့ ဟိန္ဒူနဲ့နွယ်ပြီး သိမိလို့ပါပဲ။ ဟိန္ဒူက မသတ်ရတဲ့ဟာ အားလုံးရဲ့ အသက်ပါပဲ။ သစ်ပင်လောက်ပဲ ကျန်ပါတယ်။(ဘုရား၊ စာ-၁၃၁)
-ဒါတွေကြောင့် ဘုရားရဲ့ မသတ်ရမယ့် အချက်ရဲ့ အနက်ဟာ လူ့အသက်ပဲ ဖြစ်တယ် အခြားအကောင်ပလောင်တွေရဲ့ အသက် မဟုတ်ဘူး။(ဘုရား၊ စာ-၁၃၅)
-ဘုရားရဲ့ သမာတဲ့အပြုအမူထဲက အသက်ရှောင်မှုဆိုတာ လူအသက်သတ်တာ ရှောင်မှုလို့အဓိပ္ပါယ် ထင်ရှားတယ်။
ဘုရားဟောတဲ့ အသက်သတ်ရဲ့ အနက်ဟာ ရောဟိတသကို ဟောချက်လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်ဟောချက် ဒီအချက်တွေကြောင့် လူ့အသက်ပဲဟောတာဖြစ်တယ် လူကတခြားဖြစ်သူတွေရဲ့
ဒါနဲ့စပ်လို့ တွေးစရာရှိပါတယ်။ ဘုရားဟော ဒီလိုမဟုတ်ဘူး ထင်တယ်လို့ပါပဲ။ လူသိများတာက ဘုရားဟာ သတ်မှုကရှောင်ရမယ်
အသက်ကို အားလုံးရဲ့အသက်အဖြစ်ဟောတာလို့ သိနေကြတယ် ဒီလိုသိမှားတာကတော့ ဟိန္ဒူနဲ့နွယ်ပြီး သိမိလို့ပါပဲ။ ဟိန္ဒူက မသတ်ရတဲ့အရာဟာ အားလုံးရဲ့အသက်ပါပဲ။ သစ်ပင်လောက်ပဲ ကျန်ပါတယ်။(ဘုရားစာအုပ်၊စာ-၁၃၁)
-ဒါတွေကြောင့်ဘုရားရဲ့ မသတ်ရမယ့်အချက်ရဲ့အနက်ဟာ လူ့အသက်ပဲဖြစ်တယ်။ အခြား အကောင်ပလောင် တွေရဲ့ အသက် မဟုတ်ဘူး။ (ဘုရား၊ စာ-၁၃၅)
-ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေ အသားစားရှောင်မှုဟာ ဘုရားနဲ့ လားလားမျှမဆိုင်ဘူး။ ဘုရားက အသားစားတာကို ခွင့်ပြုခဲ့တယ် ဒါကိုထောက်ရင် ရှောင်ရှားရမယ့် အသက်ဟာ အသက်အားလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ ပေါ်လွင်တယ်။ စားတာဟာ သတ်တာ မဟုတ်ပေမယ့် သတ်တာကို သွယ်ဝိုက်အားပေးတာပဲ။ မသတ်သင့်ဘူးဆိုရင် မစားသင့်ဘူးလို့ ပညတ်တန်ရာတယ်။ မပညတ်တာကို ထောက်ရင် မသတ်ရမယ့် အသက်ဟာ အားလုံးမဟုတ်လို့ပဲ။အဲ့သည့်အချက်တွေအရ ဘုရားရဲ့သတ်မှုက ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အသက်ဟာ လူအသက်ပဲ ဆိုတာထင်ရှားတယ်။(ဘုရား၊ စာ-၁၃၉)
-ဒါကြောင့် ဓမ္မမှာဘုရားရဲ့ မသတ်ကောင်းတဲ့အသက် ဟောချက်ဟာ လူ့အသက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့ သီလမှာပါတဲ့ မသတ်ဘူးဆိုတဲ့ အသက်ဟာ လူ့အသက်ပဲဖြစ်တယ်။ အခြားအကောင်ပလောင်တွေရဲ့ အသက်တွေ အကျုံးမဝင်ပါဘူး။ လူမဟုတ်သူတွေရဲ့ အသက်သတ်ဖြတ်မှုဟာ ဓမ္မအရာမဝင်တဲ့ အမှုသာဖြစ်တယ်။ မပြောပလောက်တဲ့အမှုပေါ့။ သို့မဟုတ် အမှုမမြောက်တဲ့ အမှုဖြစ်တယ်။ (ဘုရား၊ စာ-၁၄၂)
-ဘုရားဟာ ဂရုဓမ္မသီလမှာပါတဲ့ အသက်သတ်ရှောင်ရှားမှု အဓိပ္ပါယ်ကို အလွန်အချက်ကျကျ ဟောပြောသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဟောပြောချက်ဟာ လူ လက်လှမ်းမီပါတယ်။ လူမလိုက်နိုင်အောင် မကျယ်ဝန်းပါဘူး။ ပိုးသတ်ဆေး၊ သားစား တိရိစ္ဆာန် ဒါတွေဟာ လူနဲ့ မကင်းတာတွေပဲ။ ဒါတွေကို လူရှောင်ရှားရမယ် ဆိုရင် လူ ကဏ္ဍဟာ ကျဉ်းမြောင်းလာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေဟာ လူလက်လှမ်းမမှီတာတွေပဲ။(ဘုရား၊ စာ-၁၄၂/၁၄၃)
ယင်းကောက်နုတ်ချက်များဟာ "ပါဏာတိပါတ" ပုဒ်အရ "မသတ်ရဘူးဆိုတာ လူအသက်ပဲဟောတာဖြစ်တယ်" ဟူသော မိုးပြာ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ရှင်ဥာဏ၏ ဟောပြောရေးသားချက်များ ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒီများနှင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒီဝင်များ အမှတ်မမှားအောင် အဲဒီ ဟောပြော ရေးသားချက်တွေကို ဖြေရှင်းပါမည်။
အရှင်ဉာဏ၏ အထက်ပါဟောပြောချက်သည် ပါဏာတိပါတအရ မသတ်ရဟူသည် လူ့အသက်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသော ဟောပြောချက် ဖြစ်နေပါသည်။
ထေရဝါဒပိဋကတ် ကျမ်းစာတို့တွင် ပါဏာတိပါတအရ မသတ်ရဟူသည် လူသာမက ပိုးရွ၊ခြပုံး စသောသက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးကို ဟောထားပါသည်။ ထေရဝါဒ ပိဋကတ်ကျမ်းစာတို့တွင် ပါဏာတိပါတဟူသော ပုဒ်ကို -
"ပါဏဿ အတိပါတော ပါဏာတိပါတော၊ ပါဏဝဓေါ ပါဏဃာတောတိဝုတ္တံ ဟောတိ ၊ ပါဏောတိစေတ္ထ
ဝေါဟာရတော သတ္တော ၊ ပရမတ္ထတော ဇီဝိတိန္ဒြိယံ ။
"သတ္တဝါ ဇီဝိတိနြေ္ဒကိုလျင်စွာချခြင်းကြောင့် ပါဏာတိပါတ ဟုခေါ်၏။ ပါဏဟူသည် ဝေါဟာရ ပညတ်အားဖြင့် သတ္တဝါကိုရ၏။ ပရမတ်အားဖြင့် ရုပ်ဇီဝိတ၊နာမ်ဇီဝိတ နှစ်ပါးကိုရ၏။ "ဟုဖွင့်ဆိုကြ၏။
သို့အတွက်ကြောင့် ပါဏာတိပါတအရ သူတပါးအသက် မသတ်ရဟုဆိုရာ၌ လူ၏ အသက်သာမက အသက်ရှိ သတ္တ၀ါများ ဖြစ်ကြသော ပိုးရွ၊ ခြပုံး၊ ကြမ်းပိုး၊ သန်းဥ၊ ခရု၊ ကျွဲ၊ နွားတိရိစ္ဆာန် စသည်တို့၏ အသက်ကိုလည်း မသတ်ရဟု မှတ်ယူရပါမည်။
သတ်လျှင် ပါဏာတိပါတ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာ၌ ပါဏာတိပါတကံ မြောက်သောတရားများကို မြန်မာလိုသာ ရေးသား ထုတ်ပြပါမည်။
၄။ သတ်အံသော လုံးလ ပယောဂရှိခြင်း၊
၅။ လုံးလပယောဂကြောင့် သေခြင်း ဟူသော အင်္ဂါ (၅)ပါးနှင့် ပြည့်စုံလျှင်
သို့ဖြစ်ပါ၍ အရှင်ဥာဏ၏ "ပါဏာတိပါတ အရ မသတ်ရဘူးဆိုတာ လူအသက်ပဲ ဟောတာဖြစ်တယ်" ဟူသော ဟောပြောရေးသားချက် များသည် အဓမ္မ၀ါဒ တရားများသာ ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သိစေရန် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 2:12 AM No comments:
အရှင်ကောဝိဒ (ယော) | 2:07 AM | ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ | အဓမ္မ၀ါဒကွင်းဆက် | အရှင်ကောဝိဒ(ယော) | ဦးအေးမောင်3Comments so far
(က) လူသားဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါ သေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် အကယ်စင်စစ် ဖြစ်ခွင့် ဖြစ်စရာ ဖြစ်ဖို့အလားအလာများ ရှိခဲ့သေးလျှင် လူမှတစ်ပါး အခြားဘာမှ ဖြစ်စရာ မရှိ။ (လူသေလူဖြစ်စာအုပ် - ၄)
ဦးအေးမောင်၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒ- စာအုပ်မှ--
ဤသို့လျှင် ဦးအေးမောင်၏ ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓ၀ါဒစာအုပ်သည် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ၀ါဒများနှင့် တူညီနေပုံ၊ လူသေလူဖြစ်ဝါဒကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နေပုံကို မှန်းဆနိုင်လောက်ပါပြီ။ ဆက်လက်နှိုင်းယှဉ်ပြပါဦးမည်--
“ရဟန်းတို့၊ သူတစ်ပါးတို့သည် ငါ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ တရား၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ၊ သံဃာ၏ အပြစ်ကိုဖြစ်စေ ပြောကြရာ၌
“ဤစကားသည် ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း မဟုတ်၊ ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း မမှန်၊ စင်စစ်အားဖြင့် ဤအပြစ်သည် ငါတို့၌ ထင်ရှားမရှိ” ဟု မဟုတ်သည်ကို မဟုတ်သည့်အတိုင်း သင်တို့ ဖြေရှင်းရမည်။” (ဒီ။ မြန်၊ ၁။၁၁။)
Posted by အရှင်ကောဝိဒ (ယော) at 2:07 AM3comments:
မိုးပြာဂိုဏ်း၏ ဟောပြောချက်အချို့ နှင့် သူတို့၏ ထုတ်ဝေပြီးသော စာအုပ်များ
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 9:30 PM | အဓမ္မ၀ါဒမိုးပြာ Be the first to comment!
(၁) ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါလုပ်မိရင် ထပ်ထပ်လုပ်ချင်တယ်။ ဒီကံကြီးက ကိုယ့်ကို ရစ်ပတ်နေပြီ။ ဒီလူမလွတ်လပ်တော့ဘူး။
(၂) ဘုရားရဲ့ နတ်အရကောက်ဟာ မိုးပေါ်ကသူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်တယ်။
(၃) ဒီလောက်တန်ဖိုးများ ဒါနကြီးအတွက် ဘုရားဟောတဲ့ တစ်ဂါထာတည်းမှာ နတ်ပြည်လည်း မပါဘူး။ လူ့ ပြည်လည်း မပါဘူး။ ငရဲလည်း မပါဘူး။ နောင်ဘ၀လည်း မပါဘူး။ ဒါနအကျိုးကို ဘုရားက နတ်ပြည်လို့ မဟောဘူး။
(၄) ဘုရားက လူကိုသတ်မှ ပါဏာတိပါတလို့ ဟောတယ်။ တိရစ္ဆာန်သတ်ရင် ကံမထိုက်ပါဘူး။ အစိုးရပစ္စည်းဟာ လူ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကို ခိုးလို့ ကံမထိုက်ဘူး။ ကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုဟာ ကိုယ့်ကာမပိုင်မဟုတ်သူကို မေထုန်ပြုမှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀မဟုတ်တဲ့အရာတွေကို မမှန်တာပြောလည်း လိမ်ရာမကျဘူး။ မုသာဝါဒမဖြစ်ဘူး။ လိမ်ကောင်းတယ်။ မူးအောင်မသောက်ရင် အရက်သောက်တာက မိတ်ဆွေပေါလို့ စီးပွားဖြစ်တော့ အကျိုးတောင် ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလိုသောက်တာကို ဘုရားက သုရာမေရယလို့ ဟောတာမဟုတ်ဘူး။
(၅) နတ်ပြည်ရဲ့ တည်ရာက မြင်းမိုရ်တောင်ပဲ။ သည်တောင်ဟာ ကမ္ဘာ့ပထ၀ီမှာ တကယ်မရှိတဲ့တောင်ပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သည်လောက် ယုတ္တိမဲ့တဲ့အရာလို့ပဲ ပြောပါရစေ။
(၆) ဘယ်တရားမှ မရချင်နေ။ ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀ကိုတော့ မတွေးရဘူး။ ရှေးဘ၀၊ နောက်ဘ၀ တွေးတဲ့သူဆိုရင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ ဆိုပြီးသကာလ ကျုပ်တို့နဲ့ ပဋိပက္ခအရာမှာ ရှိတယ်။
(၇) ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်ပွဲဟာ ဦးနုနဲ့ ဖဆပလအဖွဲ့တို့၊ ဦးဝိစိတ္တတို့၊ မဟာစည်တို့၊ ညောင်ရမ်းတို့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေရတာကလွဲလို့ တခြားအကျိုးကတော့ မပြောလောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။
(၈) အရဟံဆိုပါတော့။ အေး သည်စာတွေက သိပ်မြင့်တယ်။ တို့လူတွေနဲ့ မတန်ဘူး။ မတန်မရာတွေကို တို့လူတွေက ရွတ်ဆိုနေမိကြတာပဲ။ သည်စာတွေဟာ စိတ္တဇအပြစ်ဖြစ်တယ်။ ဘုရားကို အထင်ရောက်သွားတော့ စိတ္တဇအပြစ်ဖြစ်စေတယ်။ အပြစ်ကကြီးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဖြစ်တယ်။
(၉) တရားဓမ္မဆွေးနွေးတဲ့အခါ ပရမတ်တွေအကြောင်း မပြောစေချင်ပါဘူး။ ပရမတ်တွေဟာ တရားမဟုတ်လို့ပါပဲ။
(၁၀) သည်လိုဆိုရင် သည်စာသင်တိုက်ကြီးတွေက တလွဲဖြစ်ထွန်းနေတာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဓမ္မအရ လိုလားစရာမဟုတ်ဘူး။
(၁၁) လူသားလျှောက်ရမည့်လမ်းဟူသည် ဘုရားသခင်၏ အစေအပါးအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိကပင် ဘုရားသခင်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
(၁၂) လေးသင်္ချေ၊ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးမှ ပေါ်ထွန်းလာသော ဗုဒ္ဓသည် မှားယွင်းသောကြောင့် မိစ္ဆာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တစ်ခုတည်း၌ ဉာဏ်ဖြင့် ဖောက်ထွင်းသိမြင်သော ဗုဒ္ဓသာလျှင် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ ဘ၀သံသရာဟူသည်မရှိ။ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တစ်ခုသာ ရှိသည်။
(၁၃) ဂေါတမဘုရားရှင်သည် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးခြင်း၊ ရေဘုဉ်းပေးခြင်းကြောင့် ကိလေသာမကုန်သေး။ လောဘ။ တဏှာ၊ ကိလေသာရှိသေးသည်။
(၁၄) ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်၏ သမီး နတ်သမီးသုံးယောက်နှင့် ပျော်ပါးစံစားရန် စိတ်ကူးမိကြောင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် ကိလေသာ မကုန်သေးဟု ဆိုရမည်။
(၁၅) ပါဏာတိပါတသိက္ခာပုဒ်အရ လူ့အသက်သတ်မှ အပြစ်ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်များအသက်ကိုသတ်လျှင် ငရဲမကြီးချေ။ အကြောင်းမူ ဗုဒ္ဓသည် အသားစားခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် သတ္တ၀ါ၏ အသက်သတ်ခြင်းကိုလည်း ခွင့်ပြုရာ ရောက်သည်။
(၁၆) ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးတည်းပိုင် ပစ္စည်းကို ခိုးယူလုယက်ခြင်းသည် အပြစ်ရှိသည်။ အများပိုင်ပစ္စည်းကို ခိုးယူလျှင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူများမှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိသောကြောင့် အပြစ်မရှိ။
(၁၇) ကာမပိုင်အမျိုးသမီးကို သဘောတူပျော်ပါးရာ၌ အပြစ်မရှိ။ ဆန္ဒကို ဖြည့်စွမ်းပေးသောကြောင့် ကုသိုလ်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
(၁၈) မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက် အကျိုးအတွက် လိမ်လည်ပြောလျှင် အကုသိုလ်ဖြစ်သည်။ အများကောင်းကျိုးအတွက် လိမ်လည်လျှင် အပြစ်မရှိ။
မိုးပြာဂိုဏ်းမှ တရားမ၀င် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိထားသည့် စာအုပ်ပေါင်းမှာ ၆၀ ကျော်ရှိပြီး ၎င်းတို့မှ အချို့မှာ -
၁။ ၀ိမုတ္တိဒေသနာ ခေါ် လွတ်လပ်ရေးဒေသနာ (စာမျက်နှာ ၁၁၀၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၆)၊
၂။ ဘုရား(စာမျက်နှာ ၂၂၈)၊
၃။ ဘာသာတရားများအကြောင်း ယေဘူယျနှိုင်းယှဉ်ချက် (စာမျက်နှာ ၅)၊
၄။ ဓမ္မပူဇာ (စာမျက်နှာ ၂၄၇)၊
၅။ စိတ်စိတ်ဖြာဖြာ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ (စာမျက်နှာ ၁၆၃)၊
၆။ ဓမ္မ (စာမျက်နှာ ၃၉၀၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၃၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်။ အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်)၊
၇။ မိုးပြာကျောင်းမှ ပေးစာများ-၁(မိုးပေါက်ကျချောင်) (စာမျက်နှာ ၄၄၉၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၁၃၅၂)၊
၈။ ဘာသာတရားကပေးသော ဆုလာဘ်
(စာမျက်နှာ ၄၆၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၃၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်။ အထိမ်းအမှတ် စာအုပ်)၊
၉။ တဏှာရှင်းတမ်း (စာမျက်နှာ ၄၀၀၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၁၉၉၆)၊
၁၀။ ဓမ္မကထာ (စာမျက်နှာ ၂၃၂၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၅)၊
၁၁။ ဓမ္မ၀ိဟာရီငွေရတုပူဇာ (စာမျက်နှာ ၂၂၄၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၈၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်။ အထိမ်းအမှတ်)
၁၂။ လွတ်လပ်တဲ့သူ (စာမျက်နှာ ၃၉၉၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၆)၊
၁၃။ ဉာဏကထာ (ပထမအုပ်) (စာမျက်နှာ ၃၅၆)၊
၁၄။ မဟာပေါဋ္ဌက (ပထမတွဲ) (စာမျက်နှာ ၃၉၄/၂၀၄/၃၀၂= စုစုပေါင်း = ၁၁၀၀)၊
၁၅။ အရိယဝေါဟာရ ဉေယျဓမ္မတ္ထကထာ (စာမျက်နှာ ၁၁၁၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၆)၊
၁၆။ နိဗ္ဗာန်ကိုသွား နောက်ဆုံးရထား (စာမျက်နှာ ၉၉၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၅)၊
၁၇။ ဗုဒ္ဓဘုရားသာသနာနှင့်မြန်မာပြည် (စာမျက်နှာ ၇၁၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၆)၊
၁၈။ အရိယသစ္စကထာ (စာမျက်နှာ ၂၇၉၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၅)၊
၁၉။ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မဒဿစာစဉ်-၁ (စာမျက်နှာ ၇၀၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၁၃၆၄၊ သက္ကာယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှ သမ္မာဒိဋ္ဌိသို့-မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနှင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိ-ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ လောကအမြင်မိတ်ဆက် - သုံးမျိုးစု)၊
၂၀။ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မဒဿန စာစဉ်-၂ (စာမျက်နှာ ၇၁၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၃၊ ဗုဒ္ဓဘာသာက မယူသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ- ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်-ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀- ဦးနှောက်၏ ချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်မှုများ - လေးမျိုးစု)၊
၂၁။ သဒ္ဓမ္မသုံးဖြာ (ပထမတွဲ) (စာမျက်နှာ ၂၀၆၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၂)၊
၂၂။ သဒ္ဓမ္မသုံးဖြာ (ဒုတိယတွဲ) (စာမျက်နှာ ၂၀၇ မှ ၃၄၇၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၂)၊
၂၃။ ငြိမ်းချမ်းရေးသစ္စာ ဓမ္မစကြာဒေသနာ (စာမျက်နှာ ၃၉၆၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၁၃၅၆)၊
၂၄။ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာလမ်းညွှန် (စာမျက်နှာ ၁၂၉၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၂)၊
၂၅။ တောစကားတောင်စကား (စာမျက်နှာ ၃၉)၊
၂၆။ အရိယသစ္စဓမ္မပေတံ (စာမျက်နှာ ၂၅၅၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၇)၊
၂၇။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှင်းတမ်း (စာမျက်နှာ ၂၈၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၈)၊
၂၈။ ဘာသာတရားဆိုတာ ဘာလဲနှင့် လွန်ကျူးမှုကို ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ (စာမျက်နှာ ၇၂၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၂)၊
၂၉။ နိဗ္ဗာန်နှင့် သက္ကာယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (စာမျက်နှာ ၈၆၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၀)၊
၃၀။ ဓမ္မစကြာညွှန်ပြချက် (စာမျက်နှာ ၁၇၂၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၃)၊
၃၁။ လူသားလျှောက်ရမည့်လမ်း (စာမျက်နှာ ၆၀)၊
၃၂။ လူသားမှန်သမျှ ကျင့်ပွားဖွယ်ရာ ပုညကြိယာဝတ္ထုဆယ်ဖြာ (စာမျက်နှာ ၁၂၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၆)၊
၃၃။ ဓမ္မ၀ိဟာရာရာမမိုးပြာခြံမှ ပေးစာနှစ်စောင်တွဲ (စာမျက်နှာ ၃၂၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၇-၂၀၀၈)၊
၃၄။ ဓမ္မ၀ိဟာရီသို့ ဦးခိုက်ခြင်း (စာမျက်နှာ ၁၆)၊
၃၅။ မိလိန္ဒပဉှာဝတ္ထုဘယ်လဲ (စာမျက်နှာ ၃၁၂၊ ပြန်လည်ကူးယူထုတ်ဝေနှစ် ၁၃၆၄)၊
၃၆။ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်ဘယ်လဲ (စာမျက်နှာ ၄၀၈၊ ပြန်လည်ကူးယူထုတ်ဝေနှစ် ၁၃၆၄)၊
၃၇။ နိဗ္ဗာနဒီပနီဘယ်လဲ (စာမျက်နှာ ၂၃၀၊ ပြန်လည်ကူးယူထုတ်ဝေနှစ် ၁၃၆၄)တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဦးဉာဏ၏ စာရေးသားသည့် အမည်ခွဲများမှာ
- သျှင်မိုးပြာ (ခ)ရှင်မိုးပြာ
(ခ) အရှင်ဉာဏ (ခ) ရှင်ဉာဏ (ခ)ဉာဏ
(ခ)ဓမ္မ၀ိဟာရီ (ခ) ဓမ္မ၀ိဟာရီအရှင်ဉာဏ (ဂ) ဓမ္မ၀ိဟာရီရှင်ဉာဏ (ခ) ဓမ္မ၀ိဟာရီဉာဏ (ခ) ဓမ္မ၀ိဟာရီ ရှင်မိုးပြာ (ခ)
ဘကြီးဝိဟာရီ ( www.forums.myanmarcommunity.com )
(ခ) အနုပါဒါ (ခ) ဗောဓိဉာဏ (ခ) မောင်ဉာဏ်ထက် (ခ) ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာပုရုသျှ (ဘုရား)
(ခ) ခေါင်းဆောင်ကြီးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 9:30 PM No comments:
သာသနာကို ဖျက်စီးမည့် အဓမ္မ၀ါဒီတို့၏ လှုပ်ရှားပုံနှင့် ၄င်းတို့၏ အမည်နာမများ
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 9:20 PM | အဓမ္မ၀ါဒမိုးပြာ Be the first to comment!
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီ တို့၏ လှုပ်ရှားပုံ နှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီ ဘက်မှ နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ် များကို သိစေရန် အလို့ငှာ တင်ပြပါအုံးမည်
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီ အဖွဲ့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေနှင့် အသင့်အတင့် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်သူများ ဖြစ်လျှင်
ဟောပြော၍ သ်ိမ်းသွင်းကြသည်ဟု သိရပါသည်
ထိုအဖွဲ၏ လှုပ်ရှားပုံမှာ သိုသိပ်ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန့်ပွါးနေသော မြို့ကြိးများမှာ
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား၊ မိုးညင်း၊ မိုးကောင်း
ပဲခူတိုင်း တောင်ငူ၊ ပြည် စသည်တို့တွင် အများအပြား ပြန့်နှံ့ နေပါသည်
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒီ ဘက် အဓိက ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်
ခေါင်ဆောင်ကြိး (ခ)သျှင်မိုးပြာ (ခ) ရှင်မိုးပြာ (ခ) အရှင်ဥာဏ (ခ) ရှင်ဥာဏ (ခ) ဥာဏ (ခ) ဓမ္မ၀ိဟာရီ (ခ) ဓမ္မ၀ိဟာရီ အရှင်ဥာဏ
(ခ) ဓမ္မ၀ိဟာရီ ရှင်ဥာဏ (ခ) ဓမ္မ၀ိဟာရီ ဥာဏ (ခ) ဓမ္မ၀ိဟာရီ ရှင်မိုးပြာ (ခ) ဘကြိး ၀ိဟာရီ (www.forums.myanmarcommunity.com)
(ခ) အနုပါဒါ (ခ) ဗောဓိဥာဏ (ခ)မောင်ဥာဏ်ထက်
၄င်း အမည်များသည် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကြီး တဥိးတည်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
-ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ (ဌ) ရပ်ကွက်၊ သစ္စာပန်းလမ်း၊ အမှတ် (၂၀)၊ မိုးပြာခြံ။
-မန္တလေး၊ ရန်ကင်းတောင်ခြေ၊ အနုပါဒါယဉ်ကျေးမူတရားဌာန၊ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ မိုးပြာခြံ၊
(ဤငါးဥိးသား တို့သည် မူလဖြစ်သူများ၊ ဂိုဏ်းထောင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်)
၁။အရှင်ဥာဏိန္ဒာလင်္ကာရ (သင်္ကန်းဝတ်ဘက်က ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကြီး)
စည်ပင်ဂိုဏ်းအုပ်ကျောင်း၊ တောင်ငူမြို့၊ ပဲခူးတိုင်း။(အနောက်ခြမ်း)
၂။အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ((သင်္ကန်းဝတ်ဘက်က တတိယခေါင်းဆောင်ကြီး)
ဦးခေမိန္ဒ(မိုးညှင်းမြို့သတိပဌာန်ရိပ်သာဆရာတော်)နှင့် ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ(မြစ်ကြီးနားမြို့ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသင်တန်းကျောင်းဆရာတော်) တို့၏ဝါဒကို အဓမ္မဝါဒဟု ဝိနိစ္ဆယချမှတ်တော်မူသည်။(၂၀၀၈)
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ က ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းအပ်သော
နိုင်ငံတော် သီခြားဝိနည်းဓိုလ် အဖွဲ့အမှတ် (၁၆/၂၀၀၈)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်
မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြိး သင်တန်းကျောင်း၊
ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ၏(မိုးပြာဝါဒနှင့်နွယ်သော)ဝါဒကို အဓမ္မဝါဒဟု ဝိနိစ္ဆယချမှတ်တော်မူသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့်နေ့- ၁၃၇၀- ပြည့်နှစ်၊ တပိုတွဲ လပြည့်ကျော် ၈-ရက်(17.2.2009) အင်္ဂါနေ့
ယခုအခါ ထို ဆရာတော်ကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါသည်
ထွက်ပြေးတိန်းရှောင်နေသည် ဟု သိရပါသည်
သင်္ကန်းဝတ်ဘက်မှ ၁၅ ပါးရှိသည့်အနက် အဓိက အကျဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
(ဓမ္မနာယက+စာစုဂေါပက+ လူပုဂ္ဂိုလ် ဘက်က ပထမခေါင်းဆောင်ကြီး၊
အမှတ် ၈၅၊ ၃-လမ်း၊ မာလာမြိုင်၊ ၁၆-ရပ်ကွက်၊ အုပ်ကျင်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
(ဓမ္မဆရာ+စာစုဂေါပက+ လူပုဂ္ဂိုလ် ဘက်က ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကြီး၊
အမှတ် ၂၈၄၊ ဇင်္ဂမလမ်း၊ ၆-ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊
(ဖုံးနံပါတ်- ၀၁-၅၄၀၉၆၀၊ 09-80-25444)
၃။ ဦးမြင့်ဝင်းမောင် (ရှင်မိုးပြာ စာအုပ်များကို ထုတ်ဝေရန် ပုံနှိပ်သည့် မူပိုင်စာပုံနှိပ်တိုက်)
အေဇက်စာပေအိမ်၊ ၃၄-လမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
၄။ဦးရင်စိန် (ဓမ္မဆရာ) (အင်းဝဘဏ်လီမီတက်)
(အရိယ ဘဏ္ဍာငွေ၊ ငွေစာရင်းအမှတ်-၈၂-၂၃၇၀၉၊ အင်းဝဘဏ်လီမီတက်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ် - ၅၅၄/၅၅၆၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြီု့။ ပေးစာအမှတ်(၅/၂၀၀၈။ ၁၃၇၀- ခုနှစ်၊
ကဆုန်လပြည့်နေ့၊ ထုတ်ဝေသည့် စာစောင်ငယ်မှာ ကြည့်)
ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိုးပြာဂိုဏ်း ၂၅-နှစ်ပြည့် ငွေရတုပူဇာ စာအုပ်ထဲမှ
မိုးပြာဂိုဏ်း၏ မြောက်မြားစွာသော ပုဂ္ဂိုလ် များထဲမှ ထုတ်နုတ် တင်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 9:20 PM No comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 12:17 AM | အဓမ္မ၀ါဒမိုးပြာ Be the first to comment!
လွန်ခဲ့သည့်ကာလ (၂၅) နှစ်က ရှင်ဥာဏ(ခ) ရှင်မိုးပြာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း မင်းကွန်း ရွှေမြင်တင်တောင်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပါသည်။
ဈာန်ရပုဂ္ဂိုလ်၊ ပဋိသမ္ဘီဒါရ ရဟန္တာ စသည်ဖြင့် ကြွားဝါကာ တရားဟောခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
ထိုအကြောင်းကို ကြားသိကြသဖြင့် နိုင်ငံတော် သံဃနာယကအဖွဲ့ကြီးကပင် စစ်ကိုင်းတိုင်း သာသနာရေးမူး ဥိးစိုးမြင့် က
စွဲဆို၍ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် သံဃနာယက သို့ တင်ခဲ့သည်။
ရှင်ဥာဏ နှင့် ရှင်ဂုဏ တို့နှစ်ပါး ရှုံးခဲ့ကြပါသည်။ တစ်ဖန် သူတို့ကပင် တိုင်းသို့တက်ခဲ့ကြသည်။
တိုင်းမှာလဲ သူတို့ပင် ရှုံးကြပြန်သည်။ တစ်ဖန် ဗဟိုဌာန ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သော နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ထံသို့ သူတို့ကပင် စောဒနာ
တင်ကြလျက် “သာသနာရေး လျှောက်ထားတောင်းဆိုလွာ” အမည်ဖြင့် စတင်၍ မြို့နယ်နှင့်တိုင်းတို့က ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြင်ဆင်ပေးရန်
တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော်မှာလဲ သူတို့ပင် ရှုံခဲ့၍ ထောင် သုံးနှစ်ကြခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော် သံဃနာယကဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တမာနိတသီရိဘိဝံသထေရ် ၏ မိန့်ကြားချက်အရ သိရသည်မှာ
(၁၉၈၃-၁၉၈၆ ခုနှစ်က ၀ိနည်းဓမ္မကံ (၉/၁၁)ဖြင့် တရားစွဲခံရပြီးကတည်းက ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူဖို့
စီရင်ခဲ့ရာတွင် တိပိဋကဓရ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးက မေတ္တာရပ်ခံမူကြောင့် ထောင်သုံးနှစ်မျှဖြင့်
ပြီးသွားရခြင်းပင်) ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၉၁-၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ထေရ၀ါဒအတွင်းမှ ဂိုဏ်းသီးသန့်ထောင်မူဖြင့် ထောင် (၁၀) နှစ်ကျခဲ့ပါသည်။
ထောင်နှစ်ကျခံပြီး ထွက်လာပြီးနောက်တွင် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံလျက်ဂိုဏ်းထူးထောင်ပြီး
မိလိန္ဒပဥှာဝတ္တု စသည်တို့ကိုပါ ပြန်လည်ကူးယူဖြန့်ဝေကြောင်းတွေ့ရပြီး (၂၀၀၂-၂၀၀၈)တို့မှာ
အကြီးအကျယ် အင်အားကြီးဂိုဏ်းဖြစ်လာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ထေရ၀ါဒသာသနာတော်ကြီး စော်ကားခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖန် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ယခုတိုင်အောင် ဆက်တိုက်ပင် ထေရ၀ါဒသာသနာတော်ကြီးကို ဖျက်စီးခံနေရပါပြီ။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံဂိုဏ်းကြိးသည် ပညာရှင်အင်အား ဘာသာဝင်အင်အား ငွေကြေးအင်အား
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီအင်အား အခိုင်မာဆုံး အဓမ္မ၀ါဒီဂိုဏ်းကြီးဖြစ်ပါသည်။
ငွေရတု ပူဇာ စာအုပ်ကို လေ့လာကြည့်လျှင် အလွန်ပင် ထင်ရှားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပညာတတ် အမည်ခံ အရှင်ဥာဏိန္ဒာလင်္ကာရ အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ (မြစ်ကြီးနား) စသူများ၊
ဥိးစိုးအောင် (သ.စ.အ- ဓမ္မာစရိယ၊သုတေသန) စသည်များ အပြင် စာရေးတတ်သူ ဟောပြောတတ်သူ
အခြေခံသင်တန်းများရော ဓမ္မ၀ိဟာရီ သင်တန်းများပါရှိကြကြောင်း သိရပါသည်။
ဓမ္မ၀ိဟာရီ သင်တန်းတို့တွင် အာသ၀က္ခယ၀ိဟာရီစာတမ်းပြုစုရကြောင်းလဲ သိရပါသည်။
ဓမ္မဆရာ ဥိးရန်အောင်၏ ဟောပြောချက်များအရ သြဠာရိကသုခုမ ဆေးပညာရှင်များအုပ်စုလိုက်ကြီးပင်
အင်းဝဘဏ်သူဌေး ဦးရင်စိန် တို့လို သူဌေးများကြောင့်လည်းကောင်း၊
ဦးဝင်းမြင့်မောင် လို ပုံနှိပ်တိုက်ကျွမ်းကျင်သူများကြောင့်လည်းကောင်း၊
အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ (မြစ်ကြီးနား) လို သိန်းပေါင်း ထောင်သောင်းချီချမ်းသာသူများကြောင့်လည်းကောင်း၊
စာအုပ်များ အများအပြား ထုတ်ဝေနိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
အရှင်ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ (မြစ်ကြီးနား) သည် စာအုပ်များစွာကို ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး
ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေလျက် ကိုယ်တိုင်ပင် နေရာများစွာသို့ လိုက်လံသွားလာကာ ပေးဝေစည်းရုံးနေကြောင်း
ထိုင်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကျောင်းသား အဖြစ်ဖြင့်နေထိုင်လျက် ၀ါဒဖြန့်နေသူ အရှင်ကုမာရာလင်္ကာရ လို(kumara@rollerboys.com) နိုင်ငံတကာ
ဓမ္မ၀ီဟာရီ ရှင်ဥာဏ ကိုယ်တိုင်ပင် ၀ိဟာရီ အမည်ခံလျက် အင်တာနက် အသုံးပြု
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လည်း တစ်ဘ၀သာရှိသည့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဝါဒီ ရှင်ဗုဒ္ဓဒတ္ထ လို ထိုင်းဘုန်းကြီးများ
အင်တာနက်အားဖြစ်လည်း ကမ္ဘာသို့တိုင်အောင် ပေါက်ရောက်ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိနေကြောင်း
စင်္ကာပူဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များ အကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားသော ဂိုဏ်းဖြစ်၍ စင်္ကာပူနေ မြန်မာူဗုဒ္ဓဘာသာလူက
မှာယူသဖြင့် ပေးပို့ရောင်းချရသည့် စာအုပ်များ များပြားကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
အရိယဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေကဲ့သို့သော ရန်ပုံငွေများလည်း အလှူခံလေ့ရှိခြင်းကြောင့် အလွန်တိုးတက် ကြီးထွားနေကြောင်း
သိရပါသည်။ ထို့ပြင် လစဉ်ထုတ် ပေးစာများကို ရောင်းချသည့် သွင်းငွေများနှင့် အခွန်လွတ်ထုတ်ဝေထားသည့်
စာအုပ်ကြီးတို့ကို တအုပ်လျင် (၃၀၀၀) ကျပ်နုံးဖြင့် ရောင်းချသည့်အတွက် အသင်းဝင်များထံမှ
ရောင်းရငွေများကြောင့် အလွန်ပင် တိုးတက်စည်ကားနေကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
မိုးပြာဂိုဏ်းမှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီနေသော စာအုပ်များမှာ သိရသလောက်တော့
လေးဆယ်ကျော် ရှိပါသည်။ နောင်သီးသန့် တင်ပြပေးပါမည်။
ဆိုခဲ့အပ်ပြီးသော အဓမ္မ၀ါဒီဂိုဏ်းကြီးသည် ၂၅ နှစ်သက်တမ်း ကာလအတွင်း အကြီးအကျယ်
ဦးဇင်း မမွေးခင်ကတည်းက တည်ထောင်လာတဲ့ အဓမ္မ၀ါဒီဂိုဏ်းကြီး
၂၇ နှစ်ထဲကို ၀င်ရောက်လာပါပြီ။
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်မြတ်ကြီးအား အတိုက်စားဆုံး အစော်ကားဆုံး အဖျက်စီးဆုံး
အန္တရာယ်ကြီး ဖြစ်နေပါသဖြင့် ပြန့်ပွါးမလာအောင်
ထေရ၀ါဒ သာသာသနာတော်အတွက် ကာကွယ်နိုင်ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်
သူတော်စင် သူတော်ကောင်းတို့အား တင်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 12:17 AM No comments:
သြှငျသာမိ - မုံရှာ | 11:23 PM | ညွန်ကြားလွာ Be the first to comment!
ထိုစဉ်က စောဒကအဖြစ် ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ကြသော
ဆရာတော်ကြီး (ဦးစန္ဒိမာ၊ဦးပညာသီဟ၊ ဥိးဝိသုဒ္ဓ၊ ဦးပညာသာမိ)တို့ မြင်တွေ့ကြရလျှင် အဘယ်သို့လျှင် အကျိုးရှိကြောင်း ဝန်ခံနိုင် တော့အံ့နည်း။
အဓမ္မဝါဒဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပြီးသောအခါ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများ၏ တံဆိပ်တော်ဖြင့် ခွင့်ပြုခံရသော သတင်းဆောင်းပါးများကို စာနယ်ဇင်းတို့မှာ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြနိုင်သည်အထိ လည်းကောင်း၊ နောင်ကာလမှာ နာမည်ဟောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ နာမည်သစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ပြန်ထလာလျှင်လည်း အမှုဟောင်း အမှုသစ်တွဲလျက် တင်ပြနိုင်သည်အထိလည်းကောင်းဆောင်ရွက်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်'' ဟူ၍ ရေးသားတင်ပြခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Posted by သြှငျသာမိ - မုံရှာ at 11:23 PM No comments:
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကို မှားယွင်းစွာ ဟောပြောရေးသားချက်ကု...
နိုင်ငံတော်ပိုင် အဖွဲစည်းပိုင် ပစ္စည်းခိုးတာဟာ အဒိန...
မိုးပြာဂိုဏ်း၏ ဟောပြောချက်အချို့ နှင့် သူတို့၏ ထုတ...
သာသနာကို ဖျက်စီးမည့် အဓမ္မ၀ါဒီတို့၏ လှုပ်ရှားပုံနှင...